Ogaden News Agency (ONA) – Maamulka Jaaliyada oo shir ku qabatay Gaarisa caasimada Gobolka W/Bari Kenya
Maamulka Jaaliyada oo shir ku qabatay Gaarisa caasimada Gobolka W/Bari Kenya
Jaaliyada Soomaalida Ogaadeeniya ee magaalad Garisa oo kamid ah jaliyadaha Ogaadeeniya kuwa oogu faca weyn oo dhalinyaro badan oo maanta gudaha iyo dibadaba ka shaqaysa ay soo mareeen ayaa shir isugu yimid ay kaga wada hadleen arimaha jaaliyadda.
Shirka uu yesshay maamulka jaaliyada ee maanta ka dhacay Gaarisa ayay xubnaha jaaliyada kaga hadleen kor u qaadida wacyigalinta xubnaha iyo siday u dabooli lahaayeen hawlaha balaadhan ee Jaaliyada u yaala iyadoo mas’uuliyiinta jaaliyadda Gaarisa. Gudoomiyaha Jaaliyada Mudane Cabdirisiid Geelqaad ayaa xubnaha warbixin ka siiyey marxalada uu marayo halganka Ogaadenya ka socoda iyo dagaaladii oogu danbeeyey ee CWXO ay la galeen kuwa Wayaanaha. Wuxuu yidhi mudane Cabdiriisd; “Halgankeenu mel fiican ayuu marayaa ciidanka Xoreynta Ogaadeeniya guul la taaban karo ayey ka gaadheen dagaalka ay kula jiraan kuwa dhulkeena ku soo duuley, waxaana la inooga baahanyahay in aan garab istaagno halgankeena oo aan qabano wax walba oo suuro gal ah”